Blogroll | gorgornews
Seteembar 1, 2012 at 7:38 g	· Filed under Blogroll
Gudiga doorashada ayaa maanta soo saaray qodobo waajib ku ah qof kastoo doonaya inuu isku soo taago jagada madaxweyne nimada.
waxaana qodobadaas ka mid ah qofku inuu yahay muslim isla markaana uu waayo aragnimo u leeyahay xagga maamulka ama madaxtinimada.
waxaa kaloo kamid ah qodobadaas inuusan ahayn dambiile
Gudoomiyihii hore Baarlamaanka Galmudug Mudanane M.salaad oo dib ugu soo laabatay London
Diseembar 18, 2010 at 9:05 g	· Filed under Blogroll
Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Galmudug Mudane Maxamed Salaad Ducaale oo dib ugu soo laabatay London kadib markuu socdaal dheer ku soo kala bixiyay wadamada canada iyo maraykanka.
Meel kastoo uu tago gudoomiyaha waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay jaaliyada qurba joogta ah ee reer galmudug iyagoo ku faraxsanaa booqashada Mudanaha.
hadaba Mudane maxamed salaad ducaale markii uuka soo degay Gigada dayuuraduhu caga dhigtaan ee Heathrow Internal airport waxaa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay Jaaliyadda Galmudug state ee london uk iyo wariyaha Gorgor News oo waraysi la yeeshay Mudane Maxamed salaad.
Gudoomiyuhu wuxuu sheegay kulan kasta oo uu la yeeshay beesha galmudug inuu uga war bixiyay xaalada cakiran ee maanta ka jirta soomaaliya iyo waxa ay maanta ku sugan tahay Galmudug state wuxuuna jaaliyada ka codsaday inay meel uga soo wada jeedaan wixii aan dan u ahayn galmudug state.
Mudane Maxamed Salaad wuxuu wariyaha Gorgor news u sheegay inuu dhawaan samayn doono website cusub,mid kaasoo noqon doonaa mid dhex-dhexaad ah oo aan dhanna u janjeerin,wuxuuna hawada soo gali doonaa dhawaan haddii alle idmo